Joubertina, EC, eMzantsi Afrika
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguThe Belfry Kitchen
I-Birch Cabin yenye ye-a-uhlobo. Uyolo olugqibeleleyo lothando... Inxalenye yendlu encinci esecaleni kwechibi, inxalenye yendlu yomthi - Ikhabhinethi eyenziwe ngothando iBirch Cabin imi phezulu kwindawo yayo yonke: Ijonge kuyo yomibini imfudlana iTweerivier kunye nesawo, isibhakabhaka samanzi acandwe ngumthi, le shingle- indawo yokuzimela enophahla inika ukulungiswa okungalindelekanga. Ikhabhathi eyonwabisayo, umgangatho webhokisi yelitye lexabiso iboleka ngokucokisekileyo, ubuchwephesha bokwenyani, ukugalela amaplanga amakhulu, ipiyano, indawo yomlilo, ijethi yabucala, ithala leencwadi nokunye okuninzi...
Indawo yeBirch yeKhabhinethi ngaxeshanye ibekelwe bucala ngokumangalisayo, kodwa ikhuselekile. Ibekwe ngobunewunewu ngaphakathi kwemida yegadi ebanzi, efana nepaki yendalo yale khampasi yabucala, yasemaphandleni.
I-gem yokupheka, I-Belfry Kitchen, yabelana ngezi zizathu ezifanayo kwaye - kwisibini esityeleleyo - ukuphatha kwayo kunye neminikelo ngokugqibeleleyo ijikeleza ulonwabo lwamava abo ...
I-Twee Riviere ngokwayo yilali ehlanganiswe ikakhulu ziintsapho ezikhulayo kunye nezibini ezitshatileyo. Ngokwenene imeko ibonakala ifukamela iintsapho ezinkulu - kwaye iqhayisa ngenani elicacileyo labantwana abancinci: Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba umyinge weminyaka yeTwee Rivierites kule mihla ineminyaka engama-29 kuphela ubudala!
Umbuki zindwendwe ngu- The Belfry Kitchen
Umamkeli wakho osisigxina uhlala malunga ne-250m kude, kumabala ekhampasi enye, kwaye uhlala eqhagamsheleka ngalo lonke ixesha.
UThe Belfry Kitchen yi-Superhost